Apple inofunga nezve 20-inch foldable MacBook uku ichinonoka kupeta iPhone
February 22, 2022 by Martin6
Tsime rakavimbika rinowanzo fungidzira chaizvo zvirongwa zveApple gore negore zvakaratidza kuti kambani yeCupertino iri kuongorora yakapetwa. MacBook ukuwo kunonoka kuburitswa kweiyo foldable iPhone.
Ross Mudiki, muongorori weDisplay Supply Chain Consultants (DSCC), anowanzo taura pamusoro pezvinhu-zvese-zvine chekuita neketani - zvakanyanya semumwe muongorori, Ming-Chi Kuo. Ose ari maviri masosi akavimbika eruzivo pane Apple chigadzirwa pombi. Gore rapfuura, Mudiki ndiye akatanga kutaura kuti 2021 MacBook Pro inozorodza yaizoratidza mini-LED inoratidza neProMotion.
Zvino, zvichibva pahurukuro neake ekupa cheni masosi, Vechidiki vakaburitsa DSCC yakanonoka kutarisira kwayo kupeta iPhone kusvika 2025. Ndiko kugadzirisa kwemakore maviri kubva yakambotaurwa nguva yekutangwa muna 2023. Mudiki akacherekedza mushumo wake kuti Apple "hairatidzike kunge iri kukurumidza" kupinda mumusika unopetwa smartphone chero nguva munguva pfupi.
Sezvineiwo, Mudiki akati Apple iri kuferefeta laptop inopeta - pamwe kunyange modhi ine hombe 20-inch skrini. Iyi inodaidzwa kuti foldable MacBook inotsanangurwa se "chigadzirwa-chekushandisa-paviri, kabhuku kane kiibhodhi yakazara-yakazara kana yapetwa uye yekushandisa semonitor kana isina kupetwa uye kushandiswa nekhibhodi yekunze". Inogona kutsigira 4K UHD.
The time frame for the 20-inch foldable ingangove gare gare kupfuura 2025, zvichida 2026 kana 2027. Apple inonzi iri kutaura nevatengesi, asi chigadzirwa chichiri nemakore kure.